Xuzhou Yanjia Glassware Co., Ltd. ndiyo yekubasa uye zvokutengeserana kambani kusanganisa kukura, magadzirirwo, kugadzira, rokutengesa uye kutengeserana. Boka redu rakaumbwa muna July 2009 uye tine 7 madhipatimendi kusanganisira dzimwe wezvokutengeserana dhipatimendi, mudzimba zvokutengeserana dhipatimendi uye kugadzirwa dhipatimendi uye zvichingodaro. Kune zvinopfuura 50 nyanzvi hwokugadzira utariri vashandi uye okutengesa maneja vekwedu.
We zvinopa zvigadzirwa anopfuura 2000 mhando kunyanya zvinosanganisira mabhotoro regirazi, girazi zvirongo, akadai mafuta bhodhoro, chirimwa tsika bhodhoro, mhando dzose hombodo chinwiwa, hombodo dzewaini girazi, hombodo mukaka girazi, kofi girazi okuchengetera zvirongo, mwenje yokuisira, kuchengetwa chirongo, hombodo cosmetie, chiso ruomba nechirongo yemishenjere muvharo, uye marudzi ose glassware, zvinonhuhwirira uye mhiripiri mukuyi etc.Our zvigadzirwa vari aivigirwa kuUnited States, Russia, Canada, Australia, Vietnam uye zvimwe nyika 100 uye kumatunhu.
Tine kodzero Export zvinhu uye tine anenge 10 makore kukura uye kugadzirwa ruzivo. Vanobatisisa mubhizimisi nheyo mose makomborero, takava nomukurumbira pakati vatengi dzedu zvakanaka nokuda kwedu mabasa vakakwana, unhu zvinhu uye zvemakwikwi mitengo.
boka redu adopts yemhando kugadzirwa zvemichina uye rakadzika kubudiswa rwokugadzira uye tine yemhando yokuedzwa michina uye zvokuridzira, izvo anotishongedza ne simba kukura mano, uye isu vakawana 7 National kugadzira bvumidzwa certificate. Kunaka girazi zvigadzirwa kwave zvachose dzinodzorwa, iyo akunda nyasha zvose wechipfuwo uye dzimwe vatengi. Kunze, tine nyanzvi magadzirirwo chikwata uye tinogona kugadzira mhando itsva muhombodo uye kuti akuumbe itsva vatengi sezvo paminiti dzavo zvinodiwa munguva pfupi. Nesuwo kupa mhando dzose customized zvakadzama kubudiswa kuti hombodo regirazi, akadai frosting, electroplating, spraying, decal uye silkscreen, etc. isu dzinopa mishonga kupfuura 2000 mhando kunyanya zvinosanganisira regirazi bhodhoro akadai mafuta bhodhoro, chirimwa tsika bhodhoro, zvose zvamarudzi Bhodhoro chinwiwa, mwenje yokuisira, kuchengetwa chirongo okuzora hombodo zvose zvinoridzwa glassware zvinhu chokuita kwemakemikari kuedza kufanana girazi beaker, etc. Mukuwedzera, tine akakwana basa maitiro uye tinogona kupa mumiririri consignment akadai Motor chokufambisa, chitima, gungwa senga uye mhepo chokufambisa uye zvichingodaro.
Tinogona exchange pfungwa dzako uye pfungwa ive chaiyo zvigadzirwa.
Tine kugadzirwa pachedu mutsetse yedu, uye rinogona zvemakwikwi mutengo.
Kubva mbishi mashoko okupedzisira kugadzirwa, everystepare akaongororwa nevanhu mudonzvo kwedu nechokwadi kuti satification yenyu.
Tinogona kubereka zvigadzirwa kwakavakirwa vatengi requirements.Your magadzirirwo uye mharidzo dziri kutambirwa.
We acharonga nezvinobvamo rationally, kuti tive nechokwadi chokuti zvinhu willbe akagadzirira zvakanaka dzakarongwa.